Taliska ciidanka Gorgor oo sheegtay iney la wareegeen deegaano hoostaga degmada Awdheegle | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Taliska ciidanka Gorgor oo sheegtay iney la wareegeen deegaano hoostaga degmada Awdheegle
Taliska ciidanka Gorgor oo sheegtay iney la wareegeen deegaano hoostaga degmada Awdheegle
written by Admin 22/12/2021
Taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada Gorgor ayaa sheegtay iney la wareegeen deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada Awdheegle ee gobolka Sh/hoose, kadib howlgalo saacadahii lasoo dhaafay ay sameyeen.
Deegaanada Gorgor ay sheegatay iney la wareegtay ayaa waxaa ka mid ah Shaamgare, Jowhar yareey iyo Mubaarak oo ka mid ah deegaanad hoostaga Awdheegle.
Saraakiil ka tirsan ciidanka Gorgor oo la hadlaayay warbaahinta dowlada ayaa sheegay in ciidamada Gorgor ay ka go’an tahay la dagaalanka Al-shabaabka ku sugan deegaanada gobolka Sh/hoose.
Saraakiisha ayaa intaasi ku dartay in howlgalada ay sameyeen ay ku dileen 5 ka mid dagaalamayaasha Al-shabaab, islamarkaana ay ku dhaawaceen 7 kale oo ka tirsan dagaalyahanada Al-shabaabkii ku sugnaa deegaanka Shaamgare oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Awdheegle.
Gabagabadii taliyaha guutada Gorgor Dayax Cabdi Cabdulle ayaa dhankiisa sheegay in howlgalka Shabaab ay kula dagalaamayaan ciidanka Gorgor ay sii wadayaan, islamarkaana ay ku wajahan yihiin deegaanada kale ay haatan ku sugan yihiin dagaalamayaasha Al-shabaab.
Taliska ciidanka Gorgor oo sheegtay iney la wareegeen deegaano hoostaga degmada Awdheegle was last modified: December 22nd, 2021 by Admin
Soomaaliya iyo Talyaaniga oo kala saxiixday Heshiis Is-afgarad ah oo ku saabsan waxbarashada
Nabadoon Iyo Imaamaan Masjid Oo Xalay Lagu Diley Afgooye
Dhageyso+Sawiro:-Xafiiska Qunsiliyadaha oo Baydhabo laga furay
Ciidanka dowladda oo fuliyey howlgal miino baaris ah
Midowga Yurub oo Soomaaliya ka taageeraya amniga, xasiloonida iyo dib u heshiisiinta.
Dhageyso+Sawiro:-Madaxweynaha KGS Cabdisiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo howlo shaqo ugu maqnaa magaalada Muqdisho ayaa maanta dib ugu soo laabtey magaalada baydhabo
Dowladda Sudan oo u yeedhatay safiirkeedii Itoobbiya
Dhallinyaradii lagu afduubay Magaalada Beledweyne oo la sii daayay